Lamba tsy tantera-drano any ivelany, lamba an-kalamanjana ivelany, lamba Oxford - Dro
Hangzhou Dro Textile Co., Ltd. dia orinasan-damba lehibe mitarika amin'ny famokarana sy ny varotra. Manana ekipa orinasa efa za-draharaha sy mahay izahay. Manana 5 mahery isika,5Karazana lamina 00 azon'ny mpanjifa misafidy( lamina nolokoana & vita pirinty) avy ary ny habetsaky ny lamina mitombo amin'ny taha 15% isan-taona. Miaraka amin'ny kalitao miavaka sy ny fahombiazana avo lenta, ny fahaiza-manao matanjaka ihany koa hanamboarana arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Manana traikefa an-karena amin'ny varotra lamba ny fanondranana ary manana laza tsara eo amin'ny sehatra.
Niorina tamin'ny 2009
11 taona niainana
Mihoatra ny 5000 + Vokatra azo
15% + Fitomboana haingana
Polyester Leopard Natonta
Ireto misy andiana camouflage misy famaritana momba ny entana Lanjan'ny valiny 170T PU mifono 40 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 170T （HD） PU mifono 45 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 180T PU mifono 48 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 180T （HD） PU mifono 49g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 190T PU mifono 50 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 190T （HD） PU mifono 52g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 210T PU mifono 57 g / ㎡ 150cm / 170cm / 177cm181cm 170T Sliver mifono 49 g / ㎡ 150cm / 170cm / 1 ...
Ravina polyester vita pirinty
Polyester polyester 190T mora ...
Ireo dia camouflage Series misy manokana ...
180T Sina manamboatra ...
170T avo lenta nolokoana ...
Lamba akrilika ho an'ny ...
Ireto misy camouflage Series misy lamba I ...